The Best Electric Skateboard nojosaka Ukuze IBhodi lwakho - Jomo Technology Co., Ltd
Ngokuvamile ungafuni ukuba uthwale yakho skateboard kagesi amabanga amade ngesandla, futhi ubhaka ibhodi kungenza kube lula kakhulu ukwenza kanjalo. Nge ubhaka ibhodi, ungase futhi ukhululeke baphathe ibhodi yakho ukusebenza ngesikhathi ekuseni yezimvula namanje ukuyigibela emuva ekhaya lapho kungcono sunnier kusihlwa. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ngenxa kagesi skateboard nojosaka ukuthi ingakwazi ukuthwala 15 lb + longboard:
Burton Day othatha Pro 28L
Omunye imfihlo khumbula lapho ubheka ubhaka ibhodi wukuthi ukushibilika eqhweni nojosaka ngokuvamile ukusebenza kahle. Burton, a owaziwa imishini ukushibilika eqhweni brand, has ezihlukahlukene ukushibilika eqhweni nojosaka ezisebenza kahle. Usuku othatha Pro 28L ingesinye sezibonelo zalokho ezinjalo, ne ezihlukahlukene imibala, indawo eyanele ukuze ubone ezinye igiya efana esihlakaleni onogada nedolo pads, futhi mpo ibhodi sife uhlelo.
Koowheel Electric Longboard Bag siyindlela sasivumela abahlukene futhi ethandwa ukuba baphathe kokubili njalo futhi longboards kagesi . Mina mathupha ngincoma nalena kanye it is khulu osamukelayo abathengi abaningi. Ngaphandle kwalokho, ngenxa Christmas uyeza, Koowheel Christmas 8600mAh (amandla Double) Replaceable Ibhethri Limited-Edishini E-ibhodi isendalini. Ezinsukwini ezimbalwa nje 20 kuphela. Akubuzwa liyisipho ekhethekile amakhasimende amasha namadala.
Ungathenga i- Koowheel Longboard futhi isikhwama ukuqondisa kusuka website esemthethweni.
Unity Skateboard ubhaka
I-Unity Skateboard ubhaka kuyindlela mncane kuya emikhulu Burton Dakine izikhwama. Isekela skateboard kufika ku-15 lbs, ngakho-ke ngeke yakhelwe yamapulangwe ngoyisiwula kusinda efana ziphenduke Bamboo GT. Nokho, ngamapulanka efana ngomfutho IBhodi Dual + (Gen 2nd ) ukuthi beze nje ngaphansi umkhawulo 15 lb, uBumbano Skateboard ubhaka izosebenza kahle.
Ukuze Bamboo GT noma abanikazi Carbon GT (noma, uyaziqhenya Bamboo GTX Abokuqala zakuqala), ziphenduke inikeza uphawu ubhaka skateboard ukuluphatha amabhodi zabo. It has izici ezijwayelekile ezifana nalezi nasikhwama somphako, nazingubo lamanzi (Nokho, olwabo luphahlekwa), futhi logo lembhali ngakho izimoto angakubona ebusuku.
Ungakwazi oda ziphenduke ubhaka ngokuqondile esitolo kwabo.